Rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii goordhow soo dhammaaday ee ay isku garab dhaceen kooxaha Chelsea iyo Leicester City – Gool FM
(London) 18 Agoosto 2019. Macallin Frank Lampard ayaa weli gaari la’ guushiisii ugu horreysay horyaalka Premier League kaddib markii ciyaartii goordhow soo dhammaatay ee Chelsea martida loo ahaa ay barbaro 1-1 la galeen Leicester City.
Kulankan oo ka dhacay garoonka Stamford Bridge ayaa waxaa goolka la horreysay Chelsea waxaana u dhaliyey Mount 7’daqiiqo, halka kooxda Leicester City ay goolka bararaha ka heshay Ndidi 67’daqiiqo.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa qaar ka mid ah rikoorradii laga diiwaan geliyey kulankii Chelsea iyo Leicester City:-
>- 13 isku day Brendan Rodgers ayaan weli garaacin kooxda Chelsea isagoo tababare ah.
>- Chelsea ayaa kaliya hal guuldarro la kulantay 23-kii kulan ee ugu dambeeyey oo ay garoonkeeda ku ciyaartay horyaalka Premier League.
>- Goolkii uu dhaliyey Ndidi ayaa ahaa kiisii shanaad ee uu ka dhaliyo horyaalka Premier League iyo kiisii ugu horreeyey ee uu ka dhaliyo meel ka baxsan garoonka kooxdiisa.
>- Maddison oo caawiye ka ahaa goolkii uu kulankan dhaliyey Ndidi ayaa sidoo kale caawiyey goolkii ay kooxdiisa Leicester ku adkaatay kulankii 1-0 ku dhammaaday xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
>- Mason Mount ayaa noqday ciyaaryahankii ugu horreeyey ee Ingiriiska ah oo gool u dhaliya Chelsea isagoo ka hoos ciyaaraya tababare Ingiriis ah tan iyo Dennis Wise oo isagoo ka hoos ciyaarayay macallin Glenn Hoddle gool ka dhaliyey Blackburn bishii May ee sanadkii 1996-kii.